Nifatratra tao anaty toeram-pivarotana ny fiara kely iray tetsy Ankorahotra.
Ny antony dia satria reraka mafy ny ramatoa izay nitondra ny fiara ka tsy nahafehy intsony ny familiana. Mbola nandona moto koa izy vao nandona ilay toeram-pivarotana sakafo izay nisy olona iray naratra mafy ka tsy maintsy nentina tany amin’ny hopitaly. Niparitaka teo amin’ny arabe ny sakafo rehetra.
Roa lahy mpivarotra « cocaïne » sy « héroïne » no nidoboka am-ponja ao Antsiranana. Lehilahy iray tsy nanan-tsafidy intsony ankoatra ny nanendaka mba hahazoany vola hividianana ireo zava-mahadomelina no voasambotra voalohany. Avy amin’io no nahafahana namantatra ny misy ireo mpaninjara ireo mahadomelina mahery vaika. Nidoboka am-ponja avokoa na ny mpividy na ny mpivarotra.
Vehivavy iray tsy fantatra anarana ary tsy fantatry ny manodidina ihany koa no hita faty tetsy Ambohidrabiby ary efa somary niboridana. Raha ny fijerin’ny zandary azy dia naolana izy io ary novonoina avy eo. Nisy indray anefa no nilaza fa mpivarotena avy any Sabotsy Namehana izy io ary nahiana nanaraka lehilahy izay namono azy nony avy eo. Simba tanteraka ny tarehiny ary nahitana dian-dratra maro ny vatany.
HITA FATY TENY ANDRAIKIBA
Lehilahy iray indray no hita faty tao amin’ny farihin’Andraikiba omaly. Tsy fantatra ny momba azy io ary raha ny tsikaritra dia efa potika tanteraka ny vatany, simban’ny rano sy ny biby. Nivarahontsana ny olona, indrindra noho ny fahafantarana fa ny farihin’Andraikiba no mamatsy rano ny renivohitr’i Vakinankaratra. Raha tsiahivina dia vao tamin’ny faran’ny herinandro teo koa no nisy olona maty tao raha teo am-panaovana fanodinana sarimihetsika.
BEN’NY TANANA MATY
Maty tao anatin’ny lozam-pifamoivoizana omaly ny ben’ny tanànan’i Mitsinjo. Potika tanteraka ny vatany ary na noezahina novonjena aza dia tsy avotra intsony ny fahavoazana mafy izay nanjo azy. Omaly ihany dia efa nanomboka namangy ny olona satria raiamandrenin’ny tanàna sady olobe rahateo no namoy aina. Nanokatra fanadihadiana avy hatrany ny mpitandro ny filaminana ao an-toerana.